Tag: Omume Ememme | Martech Zone
Tag: Omume Emume
Ihe omume na usoro ahia
Mgbe m chetara ụfọdụ n'ime ihe omume dị ịtụnanya m gara, dị ka Webtrend's Engage, ExactTarget's Connections na BlogWorld Expo - A na-efukarị m ọnụ ọgụgụ nke akụkụ na-agagharị na ihe omume na otu esi esonye òtù ndị a ọnụ. Adịghị m onye nhazi ihe omume. Enwere m ike ịmanye karịa ndị ahịa n'otu oge, echefula ọtụtụ puku ndị ọbịa. (Ọ bụ ya mere Jenn ji soro anyị rụọ ọrụ!). Fọdụ ndị folks enweghị ike ịkwụ ụgwọ ọrụ ndị ahụ
Aprimo: Nnukwu Ngwaọrụ maka Mgbakwunye Ahịa
Wednesday, November 3, 2010 Fraịde, Machị 11, 2016 Douglas Karr
N'afọ a, anyị na-ahụ ụfọdụ ọganihu dị ịtụnanya na ihu ndị ọrụ maka ndị na-ere ahịa. N'afọ gara aga, ezutere m ndị otu ndị isi na Aprimo mgbe ha kwusịrị okwu na Haresh Gangwani, VP nke Product Strategy. Companylọ ọrụ ahụ gbanwere gia na nso nso a wee malite ịnye Software dị ka nsụgharị "Studio" nke Ọrụ. E webatakwara m ma zute onye isi ha bụ Bill Godfrey ogologo oge. Ọ bụ ihe ịrịba mkparịta ụka banyere Marketing mgbanwe… na m dị mwute ikwu na a
Offọdụ ụlọ ọrụ m na-arụkọ ọrụ, ọkachasị azụmaahịa azụmaahịa (B2B) na-ahụ ụfọdụ nsonaazụ dị ịtụnanya wee laghachi na itinye ego na ihe eji eme ihe ngosi na azụmaahịa. M na a chọrọ biputere banyere mebere omume ahịa ruo oge ụfọdụ, na nso nso wee gwa Unisfair, na-eduga mebere omume, mebere tradeshow na online ọrụ ngosi na-eweta online. Unisfair na-enye ngụkọta Software dị ka ikpo okwu Ọrụ, gụnyere software nke ogbako, mgbasa ozi weebụ